Newa Times : के गर्दैछिन् गायिका ललिता मानन्धर ?
कला » व्यक्तित्व
छोरी नेपालमा बस्छिन् । लण्डनबाटै फोन गरेर छोरीलाई भजन गीत गाउँन भन्छन् । छोरी अरु होइन, एक समय नेपाली सांगीतिक फाँटमा चर्चित बनेकी ललिता मानन्धर हुन् । सपना सबै चुडी गए’ बोलको गीत एक समय निकै चर्चित बनेको थियो । पछि यही गीतको बोलबाट अन्य गीतहरु पनि समावेश गरी एल्वम नै पनि निकालेकी हुन् । उक्त गीति क्यासेट र अन्य गरी नेपालीमा १४ र नेपालभाषामा दुई वटा अल्वम सहित ३० वटा गीतमा उनले स्वर दिएकी छन् । आजभोलि थप गीत रिकर्डमा उनी लागिरहेकी छन् ।
ललिता मानन्धरको सांगीतिक यात्रा पनि रोचक नै मान्नु पर्छ । सप्तरीको राजविराजमा जन्मेकी उनलाई नौ वर्षको उमेरमा लण्डन लगिएको थियो । १४–१५ वर्षको कल्कलाउँदो वैशमा उनी पनि स्वाभावतः गीतहरु गुन्गुनाउन थालेकी थिइन् । तर उनको यो गुन्गुनाईतर्फ कसैको ध्यान गएको थिएन किन भने उनी सबैको अगाडि त्यसो गर्दिनन् पनि । यसरी गुन्गुनाउँदा प्रायशः नारायण गोपाल लगायतक गीतहरु गुन्गुनाउने गर्दथिन् । घरमा कोही नभएको मौका पारी ढोका थुनेर क्यासेटमा गीत रिकर्ड गर्ने र सो रिकर्ड सुनेर एक्लै मख्ख पर्थिन् । सँधै लुकाएर राख्ने ती क्यासेटहरुमध्ये एक कसो कसो बुबा ईश्वर मानन्धरको हातमा परेछ र छोरीको स्वर सुनेर खुशी हुँदै थप अरु गीत गाउन, अभ्यास गर्न र वाह्य दुनियाँमा चिनाउन घच्घच्याउन थाले ।
त्यही बेला नेपालबाट गणेश घिमिरे लण्डन पुगेका थिए, जो गीत लेख्ने र संगीत भर्ने पनि गर्थे । लण्डनमा बाबुको नटराज रेष्टरेन्ट हरेक आइतवार दिनको तीन बजेदेखि बन्द हुन्थ्यो भने अब संगीतका लागि उपलब्ध भयो । केही अन्य व्यक्तिहरु पनि समावेश गरेर कोशेली म्युजिकल ग्रूपको गठन भयो । नेपालीहरुको संस्था यतिका कार्यक्रमहरुमा यही सांगीतिक समूहले गीतहरु गाउन थाल्यो । यसरी गीत गाउने अभ्यास गर्दै गरेका ललिता एक पल्ट नेपाल आउँदा सबैले गीत रिकर्ड गर्न र सके एल्बम पनि निकाल्न सुझाव दिए । समूहकै चार र अन्य चार गीतको रिकर्ड मात्रै गराएनन्, एल्बम पनि निकाल्नुका साथै छ वटा गीतको दृष्यांकन पनि भ्याए । यति गरेर उनी लण्डनतिर नै लागिन् ।
ललिताले सोचेकी पनि थिइनन्, आफूद्वारा गाइएका गीतहरु हिट होलान् भनेर । श्रोतालाई लाग्दथ्यो, गायिका नेपालमा नै छिन्, नहोस् पनि किन, सँधै गीत रेडियोमा बजेकै छ, टेलिभिजनमा प्रशारण भएकै छ । नेपालमा आफ्ना गीतहरु हिट भइरहेको खबर उनी लण्डनमै पाउँथिन् र रोमाञ्चित हुन्थिन् ।
पछि ललिताको विवाह नेपालमा नै हुने तय भयो । यसका लागि उनी नेपाल आइन् । नेपाली समाजमा आफ्नो गीत मात्रै हिट भएको थाहा पाएकी उनी सेलिब्रेटी पनि भइसकेको अनुभव यहीं आएर मात्रै चाल पाइन् । बाटोमा सामान्य रुपमा हिड्न पनि मुस्किल भइदियो । टेलिभिजनमा सँधै देखिने अनुहार बाटोमा देख्दा मान्छेहरु अचम्म मान्दै फर्की फर्की हेर्थे । ललितालाई भने अप्ठ्यारो पथ्र्यो, लाज पनि लाग्थ्यो । कसैकसैले त नामै काटेर पनि बोलाइदिन्थे ।
श्रीमान डा. श्यामकाजी मानन्धरको साथी जुजुकाजी रंजित पनि गायक नै । गायक रंजितको नेपालभाषाको गीति अल्बल ‘स्वःनुगः’को विमोचन कार्यक्रममा एक युवक उनीसित आफ्नो परिचय दिन आए र सोधे– तपाई नेवार, नेवार गीत गाउनु पर्दैन त ?’’
जातले नेवार भएपनि ललितालाई नेवार भाषा आउँदैनथ्यो त्यति बेला । ती युवक हुन् सुलिन्द्र शाक्य र संगीत कम्पोज गर्छन् । आर. मानन्धरको शब्द रहेको ‘मतिना हे जूगु ला धाये मफुनि’ गीतमा संगीत भरी ललिताको स्वर दिने चाँजोपाँजो मिलाउने काम भयो । यो गीत पनि हिट् भयो । सुन्नेहरुलाई पटक्कै थाहा हुँदैनथ्यो, नेवार गीत गाउने ती गायिकालाई नेवार भाषा नै आउँदैन भनेर । अरु गीतहरु पनि गाउँदै जाने क्रममा दुई वटा गीति अल्बम तयार भयो, नुगः मिखा र ‘छन्ँत जिं ययेका च्वना’ । नेवार समाजमा उनको प्रख्याति यति धेरै भयो कि, भाषा सिक्न बाध्य नै भइन् । नेवार भाषा सिक्न प्रोत्साहन दिने श्रीमान, आफन्त र साथीभाईहरुको सर्कल तथा समाजको अपेक्षालाई पन्छाउन नसक्दा भाषा सिक्न तिर ध्यान दिइन् र अहिले उनी नेपालभाषा (नेवार) राम्रैसित बोल्छिन् ।